Achọrọ m ịzụta smartwatch? | Akụkọ akụrụngwa
Otutu n’ime unu ka a na-eduzi n’ajuju a, nri? Made mebeghị mkpebi gị, ị maghị ma ị ga - eji igwe ọhụrụ a; na n'ezie, Ee e ị mara ọ bụrụ na ọ bara uru egodị ka uwe ndị a adịghị ọnụ ala.
Aga m ekwu okwu n'ọtụtụ ihe ma kọwaa ahụmịhe nke m, naanị n'elu na site na ihe atụ, yabụ atụla ụjọ ma ọ bụ tụba aka gị n'isi, son sNaanị ụfọdụ ihe ndị bụ isi ịmara banyere smartwatch. M ga-ahapụ gị na njedebe a ndepụta na ihe ndị kasị akpali smartwatch nke oge dị ka nke ọma dị ka ya kasị mkpa e ji mara; si ebe a onye ọ bụla nwere ike ịmalite ịchọpụta ma ọ bụrụ na ha chọrọ itinye smartwatch na ndụ ha.
1 Ma gịnị bụ Smartwatch?
2 Want chọrọ ihe atụ, nri?
3 Abụghị m onye na-emekarị elekere ma ọ bụ ngwa.
4 Ok, e nwere mmasi, mana gwa m maka igba.
5 Ok, achoro m, olee smartwatch m zụtara?
Ma gịnị bụ Smartwatch?
Site na ya smartwatch abụghị nnukwu ihe, elekere ihuenyo ihu ebe ị nwere ike ịhụ oge, ụbọchị, tinye skins ka ọ hazie ya na ụfọdụ ngwa ole na ole dị ka elekere nkwụsị ma ọ bụ mkpu.
Iji ghọta smartwartch anyị ga - eche iche, anyị ga - aghọta na ọ bụ ndọtị nke ama anyị, Ha abụọ na-ekwurịta okwu vía bluethoot nakwa na anyị akwụkwọ ikikena-achịkwa anyị ekwentị site na smartwatch nke a pụrụ iche na ngwa ngwa ụzọ.
Ọrụ kpakpando nke smartwatch, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, bụ njikwa ọkwa. Thema ọkwa ndị anyị na-enwetakarị na ama anyị ga-adịkwa na smartwatch anyị na-enye anyị ohere ịnweta ha n'ụzọ dị mfe na ngwa ngwa, na-enweghị igbu oge na-enweghị ịwepụ mkpanaka ahụ n'akpa.
Want chọrọ ihe atụ, nri?
Ka anyị mee ka ọ dị mfe nghọta, m ga-enye gị ụfọdụ atụ iji, dị adị n'ezie ma ọ na-eme m mgbe mgbe.
M na-ezute otu enyi kọfị na 19:30 pm, ọ bụ 19.25:5 pm na m na m na-aga, smartwatch n'akpa m na-ekiri na nkwojiaka m. Na mberede, ọmajijiji, m na-ele anya na elekere, m na-ahụ a WhatsApp si enyi m na-ekwu na ọ bụ ugbua. Site na mkparịta ụka dị mfe na smartwatch, ana m aza ozi ahụ na-ekwu site na olu: "Ana m aga n'ụzọ m, aga m anọ ebe a na nkeji XNUMX."
Achọghị m iwepụ ekwentị mkpanaaka, Achọrọ m iziga ozi dị mfe, doro anya ma dị nkenke; n’agaghị egbu oge.
Ihe atụ ọzọ? Ka anyị rute ya. Ọ dị ka ọ ga-ezo mmiri ozuzo, m weliri ogwe aka m wee sị smartwatch: "ok google." Ana m echere 1 nke abụọ ka ọ banye n'ime ọnọdụ ige ntị ma m kwuo ọzọ: «Oge». AN'oge m na-enweta ya amụma ihu igwe na-esote okpomoku.
Ingbanye otu ọzọ: gekele na smartwatch APP Spotify Enwere m ike ijikwa olu nke la mmeputakwa ma gaa abu; ihe a niile na-enweghị wepụ ihe smartphone na site na nke a dị mfe omume na mkpịsị aka na ihuenyo nke m smartwatch.
Bịa, nke ikpeazụ. Ọ bụrụ na anyị wụnye gịna ngwa nke «dabara"bụ nos ga-ekwe gụọ usoro na anya njem na-akpaghị aka, na-enweghị mkpa ịmekọrịta ya, na akpaghị aka, mgbe ahụ, anyị nwere ike ịkpọtụrụ data a n'ụdị nchịkọta kwa ụbọchị, kwa izu ma ọ bụ kwa ọnwa.
Abụghị m onye na-emekarị elekere ma ọ bụ ngwa.
Nke a bụ ihe doro anya megide, ọ bụrụ na ị na-apụ mgbe ị na-eyiri elekere ma ọ gaghị adabara gị, ọ nwere ike ọ gaghị abụ echiche kachasị mma iji mefuo ego na gadget nke ga-emecha chefuo na drọwa.
Anyị kwesịrị icheta na ebe ọ bụ na anyị anaghị ahapụ smartphone n'ụlọ ma buru ya ebe niile, ọtụtụ n'ime anyị enwetala iji chọpụta oge na ya, si otú a na-ahapụ nkwojiaka anyị. M, n'onwe m bụ otu n'ime ndị a maka afọ 3 gara aga, na mbụ anyị nwere ike ịsị na abụ m onye nke ndị na-eyi elekere 50% nke oge ahụ. Ihe gbanwere mgbe m zụtara smartwatch 3 ọnwa gara aga, Adịkwaghị m ahapụ ụlọ n'èzí él. Nye m, ọ ghọọla ihe na-adịghị mkpa, mana ee mara mma bara uru.
Ok, e nwere mmasi, mana gwa m maka igba.
Anyị abịarutela isiokwu kachasị aghụghọ niile na nke a bụ nke tụbara m ọtụtụ ihe ma a bịa n'ịzụrụ smartwatch. N'ime ndụ anyị kwa ụbọchị, anyị enweela ọtụtụ ite, nri? M na-eji smartphone ọtụtụ, na-abụkarị mbadamba ma echefula laptọọpụ ahụ, ah, ebook kwa. Na n'ezie, ngwaọrụ ọzọ dị na ezinụlọ pụtara nke ahụ anyị ga-elekọta ya ma debe ya batrị. Emehiela, nke ahụ bụ nkwa na ị gaghị ekwu ya, ọgbaghara.
Site na obere obere ya smartwatch enweghị ohere dị ukwuu maka ezigbo batrị, yabụ ụdị ndị dị ugbu a nwere batrị 200-400 mAh, ma ọ bụ obere. Batrị a, yana iji ọrụ, ga-enye anyị nnwere onwe site na 1 ụbọchị ma ọ bụ 2 kachasị. Ọ bụ ezie na maka ọgbọ dị n'ihu, a na-atụ anya smartwatch ịbawanye nnwere onwe ya n'oge ahụ, ọ dị m nwute ịgwa gị na nke a bụ ihe ọ bụ. Ah, na mmụba nke nnwere onwe agaghị adị ka ihe ọ bụla gbaa.
Na-enwe mmeri mgbe ụbọchị abụọ m nwere ike ikwu na ị nwere obere ihie, ekiri ruo mgbe gị na ya na ya ga-emekọrịta ihe akpaka ihuenyo anya setịpụrụ na sekọnd ole na ole, naanị iji chọpụta oge ahụ.
Ọtụtụ smartwatches nwere ngwa ngwa odori mode na anyị nye 40% ma ọ bụ 50% nke batrị na nkeji iri na ise, ya mere, jiri elele nke a.
Ok, achoro m, olee smartwatch m zụtara?
Nke ahụ bụ ihe dị oke mkpa. Ọ bụ ezie na ahịa dị oke njedebe, ọ kabeghị aka ebe ha niile na-enye uru kachasị mma; yabụ ị ga-atụkwasị obi na ndokwa nke ndị editọ na echiche nke ndị ọrụ. Fíjate ezi na ntule nile na eghọta ha bien.
Ma, ¿kedu họrọ android -eyi, IOS o nwere usoro dịka Tizen si Samsung? Ọzọkwa ị ga-enyocha ma tụọ. Intuition kwesịrị ịgwa gị na Apple Watch ga-adaba na iPhone mana n'ozuzu, sistemụ niile nwere ike na adịghị ike ha.
Otu ihe dị ezigbo mkpa mgbe anyị ga - azụta igwe elekere anya nke anyị ga - ele anya bụ atụmatụ ahụ, nke ahụ bụ el nche bụ a ngwaọrụ ma n'otu oge ahụ a zuo ezu. Iwu nke ngwa ụtọ na ejiji na-achịkwa ngwa, n'ihi ya, anyị ga-enwe mmasị na ha. Ya mere, ka ị ghọta m, m na-eyi Asus Zenwatch 2 ebe ọ bụ na m nwere elekere akụkụ anọ ma ọ dị ka ọ dị ezigbo mma.
Echegbula, enwere smartwatch dị n'ebe ahụ maka gị, nke ga-adabara gị n'ụzọ zuru oke, ma ọ nwere gburugburu ma ọ bụ akụkụ anọ. Ha niile nwere aru, akwa, okirikiri na imecha ihe di iche iche, na agba. N'ezie, ọtụtụ n'ime ha na-eji ọtụtụ eriri nwere ike ịgbanwere ịhọrọ site na: akpụkpọ anụ, ọla edo, igwe anaghị agba nchara. Ma lezie anya kemgbe ntọala niile a nwere ike ịdị mfe ọnụahịa nke smartwatch 300Ruo € 600; na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ma ọ bụrụ na anyị ga-achọ ihe ọzọ dara oké ọnụ.
N'ebe a, anyị na-eweta ụfọdụ n'ime na smarwatch ọzọ iọdịmmatupu ahịa na ụfọdụ n'ime nkọwa ya bụ isi:
Size: 38.6 × 33.3 × 10.5mm ma ọ bụ 42mm 42 × 35.9 × 10.5mm
Ihuenyo: AMOLED 1.3 sentimita na 1.5 sentimita
Ion-X ma ọ bụ Sapphire kristal
205 na 310 mAh batrị
Bluetooth 4.0 na WiFi
Mmetụta Uche Obi
Lelee Sistemụ nrụọrụ OS
Ogo: 45.5 x 52.2 x 10.9mm
Ngosipụta: P-OLED 1.3 ″, 245 dpi
Gorilla Glass 3 iko
300 na 400 mAh batrị
Gam akporo Wear Sistemụ nrụọrụ
Akụrụngwa: Snapdragon 400, 4Gb nke ebe nchekwa dị n'ime, 5120 MB RAM
Nha: 42mm ma ọ bụ 46mm na dayameta na nsụgharị ya abụọ
Ihuenyo: IPS 1.37 ″, 263ppi (360 X 325) na IPS1.56 ”(40mm), 233ppi (360 X 330)
Ogo: 49.6 x 40.7 x 9.4 na 45.2 x 37.2 x 10.4 (LxWxH)
Ngosiputa: Amoled 1,45 ″ 273ppp (280 × 280) na Amoled 1.63 ″ 278ppp (320 X 320)
Bluetooth 4.1 na WiFi
Akụrụngwa: Snapdragon 400, 4Gb nke ebe nchekwa dị n'ime 512 MB RAM
Nkeji: 42,3 x 49,8 x 11,4mm na 42,3 x 49,8 x 11,4mm (W x H x D)
Ihuenyo: SAMOLED 1,2 ″ 302ppp (360 × 360). Safaiya kristal
250 mAh batrị
Bluetooth 4.1, WiFi na NFC
Sistemụ arụmọrụ Tizen
Akụrụngwa: Exynos 3250, 4Gb nke ebe nchekwa dị n'ime 512 MB RAM
Size: 42mm n'obosara, 11.3mm thick
Ngosipụta: sentimita 1,4, 286 dpi (400 × 400). Safaiya kristal
300 mAh batrị
Nha: 36 x 5,1 x 10mm; 45g
Ihuenyo: sentimita 1,6 (320 × 320)
420 mAh batrị
Bluetooth 4.0, NFC na WiFi
Akụrụngwa: Quad ARM A7, 4Gb nke ebe nchekwa dị n'ime 512 MB RAM
Enwere m olileanya na ozi a baara gị uru ma nyere gị aka ịme mkpebi ziri ezi. Kedu smartwatch kachasị amasị gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Achọrọ m ịzụta smartwatch?
Agbaghara m ihe na-eme ka ọtụtụ n'ime anyị na-enwe mmasị na egwuregwu, ọrụ egwuregwu ma ọ bụ onye nata GPS azụ. Gear S2 na Moto Sport so na mmadụ ole na ole na-ebu ya. Gear S2 nwere ihe nkwado ma ọ na-aga nke ọma
Zaghachi Juan Francisco Pelaez Cancio
Daalụ Juan Francisco, ị dị ezigbo mma na nke a bụ isiokwu dabara adaba maka isiokwu, aga m ewetara ndị ọrụ nchịkọta akụkọ nkwupụta ahụ.
Zaghachi Xavi Carrasco